म शिशा पुछ्दिनँ ५
चार बर्षपहिलेको एउटा घटना याद भो,
“आमा, अब मलाई ज्यामिति बाकस चाहिन्छ है, पर्सीबाट ज्यामितीको पढाई हुन लाइच्च !” म त्यहीबाटो भएर कतै जाँदै थिएँ, एकजना गाउँले भाईले आफ्नी आमासँग ज्यामिति बाकसको माग गर्दैथिए ।
उनकी आमाले झर्किदै भनिन् – “तेरो बाउले पैसा नपठाएको पाँच महिना भैसक्यो, मैले कहाँबाट ल्याएर दिने हो ?”
म बाटोमा टक्क रोकिएँ, आमा–छोराको वार्तालाप सुन्नलाई । बच्चाले माग राखिनै राख्यो, उसलाई बाबुले पैसा पठाउनु या नपठाउनुसँग सम्बन्ध थिएन । आमाले प्रतिजवाफ दिईराखीन् । एकछिन पछि पट्यांग आवाज आयो । आवाजसँगै अर्को करुण आवाज आयो । त्यो रुवाईको आवाज थियो । लगत्तै, म निशब्द त्यहाँबाट हिडेँ ।
एकपटक अमेरिका घुमेर फर्केपछि नयिका रेखा थापाले सार्वजनिक टिप्पणी गरेकी थिईन – “अमेरिकामा अरु त सबै ठीक लाग्यो तर आफ्नो बच्चालाई एक दुई झापड लगाउन पनि नपाइने कुरोले ताजुब बनायो । त्यो कस्तो नियम हो ?” आमा पनि नबनेकी उनले गरेको सार्वजनिक टिप्पणीले एउटी छोरीको बाबु बनिसकेको मलाई चाँहि आश्चर्यचकित बनायो । त्यो अलिकति स्वभाविक टिप्पणी भैकन पनि त्यसले नेपाली संस्कारको दुर्बल पाटोलाई उस्तै प्रष्ट पार्दथ्यो । आज पर्यन्त छोरीलाई एक थप्पड पनि नलगाएको मलाई उनको टिप्पणी कतै न कतै हिंसा र आमा वा बाबु बन्नुको अहमसँग जोडिएको पनि पाएँ ।
कहिलेकाही म यस्तो पनि सोच्दछु कि कति नेपाली बालबालिकाहरु होलान जसले आफ्नो शैशवकालमा कत्ति पनि डर त्रास वा हिंसा सहनु नपरेको होस । अनि फेरि म सम्झन्छु ती दिनहरु कि आमाको आज्ञाकारी सन्तान हुँदाहुँदै एकाध साना त्रुटीहरुमा आमाले लगाएका थप्पडहरु । एक हिसाबले ती मेरा भलाईका लागि नै थिए, किन्तु अर्को हिसाबले त ती हिंसा नै थिए । के ती साना परिणामका यातना थिएनन् त ? फेरि यस बखत मैले ती थप्पडहरुलाई सिधैं हिंसामा जोडेर हेर्दा हाम्रो समाजलाई उती प्रिय नलाग्न पनि सक्दछ । तर ती आफ्ना सन्तानहरु गलत बाटोमा नहिडुन् भन्नका खातिर चालिएका गलत उपाय नै थिए । ती उपायहरु गलत किन पनि थिए भने तीनले बालमनोविज्ञानमा नराम्ररी प्रभाव पार्दछन् । गल्ती गरेपछि बाबुआमाबाट पिटाई खाने एउटा बच्चोले आफ्नो भाई वा बैनीले त्रुटी गर्दा पनि उहि उपाय अबलम्बन गर्छ नै । जस्तो, मैले पनि गरेँ । मैले गल्ती गर्दा आमाबाट चुटाई खाएँ, अनि भाईले गल्ती गर्दा उनले मेरो पिटाई भेटे ।
यहाँ चाँहि म बाटोमा हिड्दै गर्दा कहिलेकाही देख्छु आफ्नो बच्चासँग हिडिरहेका आमाबाबुहरु । र, बच्चासँग आमाबाबुले गर्ने कार्यलापहरु । एकपटक म बस कुरिरहेथेँ, बस बिसौनीमा एउटी अधवैशे महिला र उनको बच्चा पनि सँगै थिए । बस आउनै लागेको थियो बच्चा कुदेर पर पुग्यो र ती महिलाले यति बिनम्रतापूर्वक बच्चालाई फकाएर आफूतिर बोलाईन कि बच्चा अझ अरु परपर दौडियो । उनको केहि जोर नचलेपछि उनी बच्चा लिन दगुरिन । बच्चालाई उनले फकाउँदै केही भनिन् । तिनी आक्रोशमा चिच्याउने वा कराउने समेत केही गरिनन् । यहाँ त्यस्तो कुनै पनि आमाले गर्दैनीन । कुनैपनि बाबुले गर्दैनन । बस पनि आयो र उस्तै स्वभाविक ढंगले उनी बसमा चढिन । अनि मैले झल्याँस्स आफैलाई सम्झेँ, छोरीलाई याद गरेँ सायद त्यो बच्चा र आमाको ठाउँमा मेरी छोरी र म हुन्थ्यौं भने मैले थप्पड नलगाएपनि छोरीलाई तर्साउने तरिकाले नै बोलाउँथे होला । र, छोरी तर्सिदै मनेर आईपुग्थिन होली ।
म बुझ्ने भएपछि मैले के थाहा पाएँ भने आफ्ना छोराछोरीलाई तर्साउने, गाली गर्ने वा एक दुई थप्पड लगाउने मेरो आमा मात्र गर्नुहुन्न । त्यो त प्रायः सबैका आमाबाबुहरुले गर्दारहिछन् । छरछिमेकमै धेरै साथीभाईहरु माथि उनीहरुका आमाबाबुबाट चरम यातना दिने काम हुन्थ्यो । धन्न ! हाम्री आमाले सिस्नोले पोल्नुभएन । थाममा मात्र बाँध्नुभयो एकछिन । अस्पताल भर्ना हुने गरी पिटाई खानुपरेन एक दुई झापड लगाउनु भो मात्र । तर ती आमाबाबुहरु के साँच्चीकै आमाबाबु हुन लायक थिए कि जसले आफ्ना बालबच्चाहरुलाई पिट्नकै लागि जन्माएको जस्तो व्यवहार गरे ? यहाँ सम्मकी कता हो एक जना आमाले आफ्नो जिद्धी छोरालाई तह लगाउन राती घरबाहिर बाँधेर राख्दा बच्चालाई किरा (बाघ) ले खायो रे भन्ने सुनियो ! बच्चामा यस्तो सुन्दा कस्तो अत्यास लाग्यो होला ? म त्यो अत्यासको पीडा अभिब्यक्त गर्नै सक्दिनँ यतिखेर !
हामी धनका गरिव हौंला, तर मनले पनि यतिधेरै गरिव रहिछौं भन्ने बिस्तारै बुझ्दैछु म । आफ्ना मुटुका टुक्रा बराबरका सन्तानसन्ततीलाई राम्रोसँग हुर्काउन पनि कति धेरै छुच्याई गरिराखेका हामीले । मीठो बोलेर फत्ते गराउन सक्ने कामका लागि हामीले कति धेरै उर्जा नष्ट गरिराखेका ? यातना दिएर बालबालिकालाई ठीक पार्न खोजिराखेका हामीहरुले अब हामीले बालबालिकालाई सही मार्गमा ल्याउन अबलम्बन गरेका उपायहरुलाई ठीक पार्नुपर्ने समय भएको छ । ती बदल्नुपर्ने बेला भएको छ । डरले डर जन्माउँछ । यातनाले यातनाकै पृष्ठपोषण गर्दछ । बालबालिकाहरुलाई धम्काएर हैन फकाएर असल बनाउँदा उनीहरुभित्र हामीले एउटा “असल मान्छे” पनि हुर्काइराखेका हुन्छौं ! नानीबाबुहरुलाई “ठीक पार्ने” हैन “असल बनाउने” काम गरौं । ती कलिला मुनाहरुलाई जतनले हुर्काऔं । प्रेमले फूलाऔं !